निरन्तर बढ्दै गएको शेयर बजारमा जोखिम कति ? विज्ञ भन्छन्, जोशमा होश नगुमाउनुस् ! – bampijhyala.com
Home > समाचार > वित्तिय > निरन्तर बढ्दै गएको शेयर बजारमा जोखिम कति ? विज्ञ भन्छन्, जोशमा होश नगुमाउनुस् !
८ मंसिर २०७७, सोमबार १७:१९ bampijhyala
बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । पछिल्ला केही दिनदेखि निरन्तर उकालो लागिरहेको शेयर बजारमा सोमवार सामान्य ‘करेक्सन’ भएको छ ।
सोमवार नेप्से परिसूचक २.३८ अंक घटेर १७८०.४३ बिन्दुमा झरेको छ । यस दिन सेन्सेटिभ इन्डेक्स ०.१२ अंक घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स ०.०१ अंक बढेको छ । नेप्से ओरालो लागेपनि कारोबार भने उत्साहजनक नै देखिएको छ ।
सोमवार १९९ कम्पनीको ४६ हजार २४० पटकको कारोबारमा ४ अर्ब ७६ करोड २७ लाख ४ हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड २० लाख २१ हजार कित्ता शेयर खरिदबिक्री भएको छ ।
यस दिन चार उपसमूहको परिसूचक भने बढेको छ, जसमध्ये होटल र उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक क्रमशः ३.७७ प्रतिशत र ३.५८ प्रतिशत बढेको छ । त्यसैगरी, यस दिन व्यापार उपसमूहको परिसूचक १.४१ प्रतिशत र बैंकिङको ०.४५ प्रतिशत बढेको छ ।
कारोबार रकमका आधारमा सोमवार नेपाल बैंक लिमिटेड शीर्ष स्थानमा रहेको छ । सो बैंकको यस दिन ३० करोड २२ लाख ७ हजार रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिदबिक्री भएको छ ।
कोरोना महामारीका कारण !
कोरोना महामारीका बीचमा अन्य क्षेत्रमा लगानी नहुँदा शेयर बजारमा लगानीकर्ताहरू आकर्षित भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
बजार विश्लेषकहरूका अनुसार अन्य क्षेत्रमा लगानी नहुनु र शेयर बजारमा लगानी सुरक्षित देखिनुका कारण पछिल्ला दिनमा यसतर्फ लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको हो ।
शेयर बजार विश्लेषक विष्णु बस्याल पछिल्ला दिनमा अन्य क्षेत्रमा लगानी नहुँदा बैंकमा तरलता पर्याप्त भएको र शेयर बजारमा लगानी बढेको बताउँछन् ।
लोकान्तरसँग उनले भने, ‘कोरोनाका कारण अहिले कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्न लगानीकर्ता इच्छुक छैनन्, जसका कारण बैंकमा तरलता पर्याप्त छ । यसो हुँदा शेयर बजारमा लगानी आउन गयो ।’
उनका अनुसार मानिसहरूसँग भएको रकम पनि अन्त खर्च नगर्दा यो क्षेत्र सुरक्षित देखिएका कारण यस क्षेत्रमा मानिसहरूले लगानी बढाएका हुन् ।
पूँजी बजारमा सूचीकृत भएका कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था धरासायी नभएको र उनीहरूले नाफा कमाइरहेको हुँदा कोरोनाको त्रास हराएको र लगानीकर्तामा आत्मविश्वास बढेको देखिएको विश्लेषक बस्याल बताउँछन् ।
उनले भने, ‘अहिले बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूमा होटल क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रहरूको अवस्था खस्किएको देखिएको छैन, केही कम भयो होला तर घाटामा नै गएको छैन । त्यसकारण जनमानसमा कोरोनाका कारण व्यापार खस्कन्छ, जोखिम बढ्छ भन्ने सोच थियो, अहिले त्यो हरायो, जसका कारण पनि लगानीकर्ता लगानीमा आकर्षित भए ।’
अहिले शेयर बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्नु स्वाभाविक नै भएको बजार विश्लेषक अम्बिकाप्रसाद पौडेलले बताए ।
उनले भने, ‘गत वर्ष यही समयमा बजार १६६८ बिन्दुसम्म आएको अवस्था छ । कोभिडको कारणले लगानीकर्ता अलि हच्किएको अवस्था थियो । अब अहिले सूचीकृत भएका कम्पनीहरूको अवस्था छ, यसरी बजारमा कारोबार बढ्नु अस्वभाविक होइन ।’
उनले महामारीका बीचमा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्न पाउँदा पनि शेयर बजारलाई थप टेवा मिलेको बताए ।
उनले भने, ‘पहिले जस्तो दिनभर लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था भए महामारीमा त कारोवार ठप्प नै हुन्थ्यो । तर अहिले त कम्प्युटर, ल्याप्टपबाट घर तथा अफिसमै बसेर कारोबार गर्न सकिन्छ, यसको प्रभाव पनि हो ।’
इन्भेस्टर फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार पछिल्ला दिनहरूमा शेयर बजार सुखद् रहेको बताउँछन् ।
सोमवार सामान्य अंकमा शेयर बजारमा करेक्सन भएको बताउँदै उनले केही समय बजार तल झर्ला कि भनेर डराउनु नपर्ने बताए ।
शेयर बजारमा ४ वर्षको बढ्ने घट्ने चक्र हुने भन्दै उनले ४ वर्षसम्म पूँजी बजार बढ्दै जाने र ४ वर्षपछि घट्दै जाने अवस्था अहिले पूरा भएको बताए ।
यस्तै बैंकहरूको ब्याजदर घट्दा शेयर बजारमा लगानी बढेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘बैंकको ब्याजदर बढ्दा शेयर बजारमा लगानी घट्ने र ब्याजदर घटेमा पूँजीबजार बढ्ने अवस्था रहन्छ ।’
बजारमा जोखिम कति ?
शेयर बजार विश्लेषक बस्याल अबको केही समय बजारमा जोखिम नदेखिएको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘अबको ३/४ महिना बजार खस्कने कुनै पनि कारण मैले देखेको छैन, यो उत्साह जागिरहन्छ ।’
बजारमा तत्कालका लागि केही समय नदेखिएको बताउँदै उनले अबको केही समयसम्म लगानीकर्ताहरूलाई जोखिम वा चुनौती नदेखिएको बताए ।
उनका अनुसार नेप्से परिसूचक २ हजार १ सय वा सोभन्दा केही बढी बिन्दुसम्म पुगेको अवस्थामा पनि समस्या हुँदैन । उनले भने, ‘२१ सय/२२ सय सम्म पुगेमा पनि कुनै समस्या देखिँदैन । त्यो भन्दा माथि पुग्यो परिसूचक भने चाहिँ अवस्था फेरबदल हुन सक्छ ।’
शेयर बजार विश्लेषक पौडेल शेयर बजारमा घटबढको श्रृङ्खला चलिरहने भन्दै कोरोनालाई छिचोल्दै अन्य क्षेत्रमा लगानी बढ्दै जाँदा बैंकमा तरलता प्रवाह हुने र शेयर बजारमा पनि केही तलमाथि हुन सक्ने बताए । यद्यपि बजार अहिले नै तल घट्ने कुनै अवस्था नरहेको उनी बताउँछन् ।
जोसमा होश गुम्ने खतरा कति ?
शेयर बजारमा बढ्दो आकर्षणका कारण नयाँ लगानीकर्ताहरू पनि क्रमशः थपिँदै छन्, जसले शेयर कारोवारलाई थप उचाइमा पुर्‍याउँछ । यद्यपि नयाँ लगानीकर्ताहरूले पनि जोशमा होश गुमाउन नहुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
विश्लेषक बस्याल नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई अहिले लगानीका लागि कुनै जोखिम नरहेको भएपनि आफूले लगानी गर्न चाहेको कम्पनीको बारेमा सुक्ष्म अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । उनले अहिले जलविद्युत् क्षेत्रलाई छाडेर अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए ।
अहिले लगानीकर्ताहरूले निर्धक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिले किनेर १०/१५ दिनभित्रैमा नाफा कमाउँछु भन्ने हो भने त उनीहरूले सोच्नुपर्छ र केही वर्षका लागि नै हो भने त सबै क्षेत्रमा राम्रो छ ।’
विश्लेषक पौडेल लगानीकर्ताले आफ्नो जोखिम कम गर्नका लागि इन्डेक्सको आधारमा मात्र लगानी गर्न नहुने बताउँछन् ।
उनले भने, ‘समग्र कम्पनीको अवस्था, कम्पनीले दिने प्रतिफल र कम्पनीले हिजोका दिनमा गरेको पफर्मेन्स र भोलिको अनुमान गरेर लगानी गर्ने हो । राम्रा कम्पनीमा लगानी गर्दा लगानीकर्तालाई घाटा हुँदैन ।’
नेप्सेका सीईओ भन्छन्– प्रविधिले सबथोक गर्‍यो
शेयरबजारमा पछिल्ला दिनहरूमा आकर्ष बढ्दै जानुको मुख्य कारण प्रविधि भएको नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद बताउँछन् ।
लोकान्तरसँग उनले भने, ‘सबैभन्दा मुख्य कारण प्रविधि हो । महामारीमा बाहिर ननिस्किकन घरमै कम्प्युटरबाट शेयर कारोबार गर्न सकिन्छ, जसका कारण आकर्षण बढ्न गयो ।’
विगतका दिनहरूमा शेयर कारोबार गर्न घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने अवस्था रहेको स्मरण गर्दै उनले अहिले लगानीकर्ताले युजरनेम र पासवर्ड लिइसकेपछि सबै कारोबार गर्न मिल्ने भएकाले पनि कारोबार बढेको बताए ।
उनले जहाँ बढी नाफा हुन्छ, त्यहाँ बढी जोखिम हुने भन्दै लगानीकर्ताले सबै कुराहरू विचार गरेर लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
शेयरबजार चलायमान हुँदा सरकारको आर्थिक समृद्धिको यात्रामा सहयोग मिल्ने बताउँदै पछिल्ला दिनहरूमा कारोबार बढ्दै जानु सुखद् भएको उनले बताए ।
काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख र ट्राफिक प्रहरी प्रमुखले सम्हाले कार्यभार
बाणिज्य बैंकहरुले कर्जा र निक्षेप नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक, कुन बैंकको कति ? ८ मंसिर २०७७, सोमबार १७:१९
प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्दै ८ मंसिर २०७७, सोमबार १७:१९
अर्जेन्टिना र चिलीले बराबरी ८ मंसिर २०७७, सोमबार १७:१९
विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्र आजदेखि शुरु ८ मंसिर २०७७, सोमबार १७:१९
काठमाडौं उपत्यकामा आजदेखि निषेधाज्ञा कति खुकुलो ? कति कराई ? ८ मंसिर २०७७, सोमबार १७:१९